Nxibelelana: Yandisa iNethiwekhi yakho ye-ROI | Martech Zone
NgoMvulo, Februwari 24, 2014 Douglas Karr
Ukulawula ubudlelwane kunye nethemba lakho kunye nabaxhasi uninzi lomlo xa kuziwa ekugcineni nasekufumaneni. Ngelixa ukubuyela kutyalo-mali kuyinto emnandi kubaxumi bethu, ukubanceda ngombono, iingcebiso ngeqonga, kwanokuba sisihlanganisi seendaba zeshishini, uphando olukhuphisanayo, abanye abathengisi kunye nabenzi bezicelo zomsebenzi zihlala zibalulekile kwaye zibalulekile kubo.
I-CRM eqhelekileyo inesakhono sokurekhoda amanqaku eqela lakho lokuchukumisa- kodwa ayithethi kuthi iqhube ikhaya lokondla. Ukuqhagamshelana kunenjongo yokunceda amashishini ukuba alandele abantu abafanelekileyo, ngexesha elifanelekileyo, ukwandisa ubudlelwane be-ROI ngokuphucula ukugcinwa, ukufunyanwa kunye neendawo zokuthintela.
Dashboard -Ukulawula kunye nokulandelela yonke imisebenzi yokwakha ubudlelwane kwaye ubone zonke izikhumbuzo zakho zemihla ngemihla kunye nezenzo kwaye wazi ngqo ukuba ngubani ekufuneka ulandela yonke imihla. Landa umkhondo wenkqubela phambili yokwakha ubudlelwane kunye neenkcukacha-manani zeveki kunye nenqanaba lobudlelwane bakho ukuze wazi ngqo apho umi khona.
Iikhompyutheni ze-imeyile -Bandakanya abafowunelwa bakho ngemiyalezo usebenzisa iitemplate ezakhelweyo zikuvumela ukuba ugcine imiyalezo yakho esebenzayo xa ilixesha lokulandela. Iindawo ezinamandla zenza ukuba iitemplate zenze ngokuzenzekelayo umyalezo wakho ngedatha yakho ebalulekileyo yabamkeli.
Ukwabelana ngenqaku - Yongeza ixabiso ngokwabelana ngamanqaku ngesiXhobo soQhakamshelwano esikwisikhangeli sokuhambisa amanqaku, iividiyo, iiposti zebhlog kunye nezinye iisayithi kwinethiwekhi yakho ngomyalezo owenzelwe wena.
Umakhi we-Intro -Yenza intshayelelo phakathi kwabantu abakwinethiwekhi yakho ngokuthumela iinkcazo zakho kunye nedatha yomntu ngamnye kubo bobabini abamkeli ngaxeshanye.
ScaleMail -Thumela imiyalezo ebhalwe igama ukuya kuthi ga kuma-250 abafowunelwa abakhethiweyo usebenzisa iindawo ezizenzekelayo kunye neetemplate. Ngaphambi kokuthumela, ungongeza amanqaku athile kwi-imeyile nganye ukuze ubambe ngakumbi.
Iinkqubo -Kuvumela ukuba usete uthotho lwezenzo kunye nomntu othile okanye iqela elithile kwisithuba sexesha, nokuba ngokuzenzekelayo okanye ngemvume yakho.
Imibhobho -Jonga ngeentengiselwano zakho kwaye ubeke phambili iinzame zakho ngokubonisa ukuba zeziphi iiprojekthi ezikuwona amanqanaba ombhobho wakho. Esi sixhobo sikuvumela ukuba ube nomfanekiso-ngqondweni weentengiselwano zakho ukusuka ekuvulekeni ukuya ekuvalweni ngokwezigaba zakho ezenzelwe wena, kwaye ibonisa ukuba zeziphi izivumelwano ezinokuthi ziwele ngokuqhekeka.
Ulawulo loQhakamshelwano -Ukuba ubhalisela unxibelelwano, uya kuqhagamshela ngqo i-imeyile, iiprofayili zemidiya yoluntu kunye ne-smartphone kwiqonga lethu. Oku kuvumela ukunxibelelana ngokuzenzekelayo ukuba kuvelise indawo yogcino lwedatha yakho ngaphandle kokungena ngesandla kwicala lakho.
Umsebenzi weqela -Bek'esweni inkqubela-phambili yomntu ngamnye kunye neqela xa kufikwa kulawulo lokunxibelelana. Jonga ukuba bangaphi abafowunelwa abelana nabo kwaye bangaphi abanxibelelana nabo kule veki.
Izabelo zeqela -Nikezela umntu onxibelelana naye kwaye nguye kuphela oya kufumana izaziso zokulandela lowo unxibelelwano, enze ubunini boqhakamshelwano bokwenyani.
Yabelana ngamabhakethi -Zidibanise ngaphandle komthungo iibhakethi zakho zecandelo kwiibhakethi zeqela lakho ukuze iirekhodi zakho zonxibelelwano ezifanelekileyo zihlale zihlaziyiwe.
tags: zonxibelelanaCRMdoyenza crmGoogle +Unyukela phezuluukukhulisaukuthengisaiingongoma zokuchukumisa
AmaQela aDityanisiweyo weNtengiso
Iposi enkulu, Douglas! Ndiyabulela ngokuthatha ixesha lakho ukubhala le nto!